Yiziphi iiglavu zasebusika zokukhetha?
Enye yezesekeli ezibaluleke kakhulu, ngaphandle kokungekho owesifazane ongakwenza ngaphandle kwezimo zethu zezulu, ngokungangabazeki amagilavu. Basiza esimweni sezulu esibandayo, isikhumba sezandla zethu sihlale sisithambile futhi sibushelelezi. Kodwa amagilavu ​​akwenzi nje kuphela umsebenzi wokuzivikela, kodwa futhi ubuhle. Ngakho-ke, ukukhethwa kwamehlo ngezinye izikhathi kuphelelwa yisikhathi. Umbuzo uvela, yiziphi iiglavu zasebusika ezizozikhetha?
Amajantshi ahluki nje kuphela ngombala, kodwa futhi ekugqokeni. Futhi kakade emhlobiso wefantasti yokuklama ayikho imingcele. Mayelana namagilavu ​​njengento yokufinyelela, ungasho okuyisisekelo, futhi ngicabanga ukuthi, wonke umthetho owaziwayo: amagilavu ​​kufanele afane nombala nesitayela sesikhwama, ahambelane nezicathulo noma umbala ngokuvumelana ngokuphelele nengubo. Imininingwane eminingi ngokukhetha kanye nama-nuances ama-invoyisi. Amagundane afana nezinhlobo eziningana: ubude obujwayelekile (ngenhla ngaphezu kwesandla), kufushane (entendeni yesandla sakho), inguqulo yesobusuku - ku-elbow noma ngisho nasehlombe, izintambo (ngeminwe yokusika).
Futhi isikhumba sabhekwa njengento engcono kakhulu yokukhetha amagilavu ​​ebusika. Ukusebenzisa isikhumba sezimvu ngokuyinhloko, kukhululeka kakhulu futhi kuyathandeka. Kodwa kulabo abangaboni, kukhona i-lycra. Yenziwa esikhumbeni samawundlu asanda kuzalwa, futhi ingubo ekhethekile yenza kube lula kakhulu. I-lycra kuphela futhi idinga ukunakwa. Ungayigqoke esimweni sezulu sezulu! Uma amagilavu ​​egobile, bese uyomisa ukuze angalahlekelwa, isimo ngeke sibe lula.
Uma ukhetha amagilavu ​​esikhumbeni, unake ukubaluleka nokubhebhethekisa, kufanele kube okufanayo. Kanye nokudweba indaba kulo lonke ubukhulu, kungenjalo amagilavu ​​angadla. Enye "kodwa": ukuhlukanisa isikhumba semvelo nokusebenza. Amanye amafemu afunde ukulingisa isikhumba kahle kangangokuba ngisho nabathengisi ngezinye izikhathi abazi ukuthi bathengisa yini. Ukuze ufunde kabanzi, vula amagilavu, tk. i-underside ingakaze ifunde ukwakha.
Izigilavu ​​zasebusika ezenziwe nge-suede azisebenzi nje kuphela, kodwa futhi kukhona into enhle kakhulu. Uma uthenga, qaphela inqwaba, okumele ibe yivelvety futhi cishe ingabonakali. Lezi zinto kufanele zidwetshwe ngendlela efanayo futhi zingenayo izikhwama ze-bald. Esimweni esihle kakhulu sokuthungwa, inqwaba ishaya kakhulu futhi ingaqoqwa ngama-pellets.
Lezi iglavu ayizinhle kakhulu, kepha zifudumele futhi zinobuhle. Yebo, futhi bashibhile kakhulu. Zikhethe ngombala nokuthungwa kuya esikhwameni esinamahloni nesikhala, futhi uzothola isethi enkulu. Amagilavu ​​awaziwa angenziwa ngezinto zokwakha zemvelo, noma ngezinto zokwenziwa. Okokuqala kufudumele kangcono, kodwa kunwetshwa ngokushesha. Ngifuna ukuqaphela ukuthi abathandi bezipikili ezide, cishe ngeke bakwenze. Njengoba izipikili zingasheshe ziphule ngaphakathi kwendwangu.
Muva nje, ama-mitten athandwa, kokubili kwabesifazane nakubo abaklami. Awuzikhululekile njengeglavu, kodwa lokhu kulungile ukuhamba. Phela, iminwe yakho ihlangene ndawonye futhi ngokuqinisekile ngeke iqhwa. Ama-mittens - inketho ebaluleke kakhulu ebanda kakhulu.
Uma ukhetha amagilavu ​​ebusika, qiniseka ukuthi unake umbhede. Ngokuvame ukwenziwa ngezingubo zokugqoka, uboya bese uhlambalaza. Kukholelwa ukuthi kungcono ukuthenga amagilavu ​​ngendwangu yemvelo kanye nokufakwa okuncane kwezinsimbi zokwenziwa kuwo. Khona-ke izothola umswakama, futhi uvumele emoyeni, ngenkathi ungalali futhi uphahla. Kubalulekile ukutadisha izingqimba, ngoba uma zikhulu kakhulu futhi kungenjalo, uzosonga kalula isandla sakho. Zonke izingxenye kumele zinqunywe ngokwemininingwane yeglavu. Ngesinye isikhathi i-lining yenziwa ubuchopho, kulokhu, qinisekisa ukuthi ubomvu buhlanjwe ngokulinganayo. Noma kunjalo, izincomo eziningi ezijwayelekile kuzo zonke izinhlobo zeglavu kufanele zinikezwe, okufanele zilandelwe uma uthenga:
• Ungathengi amagilavu ​​ngaphandle kokufaneleka, noma ngabe uyakwazi usayizi wakho. Emva kwakho konke, bahlaselwa ngesilinganiso esisodwa, futhi izandla zabo zihlukile;
• Hlela izinhlobo eziningana zobukhulu obufanayo, ngoba amagilavu ​​kufanele uhlezi kahle engalweni yakho, njengezikhumba, ngaphandle kwemibimbi nemibimbi;
• Ungatholi amagilavu ​​ngethemba lokuthi bazohlala phansi noma bathulise;
• Ungazikhetheli amagilavu ​​ezenziwe ngezicucu zesikhumba. Ama-glove amahle akwenziwa ngokubalwa kwe-viscosities yesikhumba, ukuze ivumelane, ngezicucu lokhu ngeke kusebenze;
• Uma amagilavu ​​engenawo ubhedu, uwagcobe ngaphakathi ngaphakathi ngehekhi. Uma ithola ukungcola, izandla emva kokugqoka lezi zinto zizofana;
• Uma ukhetha ubude bamagilavu, uqondiswe ubude bomkhonto wezingubo eziphezulu zasebusika. Phakathi kwakhe namagilavu ​​akufanele kube khona igebe;
• Amagilavu ​​angaba nobuchopho. Bese ukhumbule ukuthi akufanele ugqoke amagilavu ​​anjalo ngengubo yoboya noma ingubo, imikhono yawo ehlanjululwe noboya.
Manje ngaphambi kokuba kubanda ebusika sihlomile ngolwazi oluwusizo. Futhi siyazi ukuthi singakhetha kanjani amajantshi ebusika "owesifazane othuthukile".
Isithombe ngesitayela sesiGreki
Umhlobiso wezithombe 2010
Kusukela kuphi okumele kube yi-wardrobe eyisisekelo yowesifazane
Ukufanisa isithombe sika-Audrey Hepburn
Yini okufanele ugqoke ingubo yesiliva?
Ubuciko bokugqoka, indlela yokufihla amaphutha we-figure
Ukukhetha umbala wezinwele kumuntu omdala
Isilinganiso se-Apgar, siyini?
Isethulo ngesihloko samakhemikhali ezithombeni
Ukupheka okumnandi kwezitsha ezintsha
Inhlangano yehhovisi lasekhaya
Ingulube isitayela saseHawaii
Indlela yokubona umyeni ofanele kumuntu?
Ungathatha kanjani amaphilisi okulawula ukubeletha?
Amazambane abhakabelisiwe emabhodwe
Isimo Sezulu eSochi ngoMashi 2017 - Isibikezelo sezulu esivela ku-Hydrometcenter
Izingane ezineziphambeko ekuthuthukiseni ngokomzwelo nasekuziphatheni komuntu siqu
Ukufumbathisa esikoleni. Indlela yokubhekana nalokhu?
Kungani abantu babe nezilwane ezifuywayo?
Indlela yokunakekela izinja ezincane
Isinkwa sePita nge-cottage shizi nemifino